NetBeans 8.2, apetraho amin'ny Ubuntu 18.04 | Ubunlog
NetBeans 8.2, apetraho amin'ny Ubuntu 18.04 ity IDE ity
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny fametrahana NetBeans 8.2 amin'ny Ubuntu 18.04 isika. Araka ny heveriko fa efa fantatry ny rehetra izao, izao dia IDE (tontolo iainana fampivoarana mitambatra) misy amin'ny sehatra samihafa. Momba ity programa ity dia efa nisy mpiara-miasa iray niresaka taminay tamin'ny antsipirihany lahatsoratra teo aloha.
Ny NetBeans IDE dia manome ny mpampiasa sehatra matanjaka be izay ahafahan'ireo mpandahatra programa mamolavola fampiharana mora foana Tranonkala mifototra amin'ny Java, rindranasa finday ary birao. Betsaka no milaza fa io dia iray amin'ireo IDE tsara indrindra ho an'ny fandaharana C / C ++. Izy io koa dia manome fitaovana tena ilaina ho an'ny programmer PHP. Ny IDE manome fanohanana amin'ny fiteny maro toy ny PHP, C / C ++, XML, HTML, Groovy, Grails, Ajax, Javadoc, JavaFX ary JSP, Ruby sy Ruby amin'ny Rails.
Ilay mpanonta dia endri-javatra manan-karena ary manome fitaovana sy modely isan-karazany. Ho fanampin'izany dia extensible be mampiasa plugins novolavolain'ny vondrom-piarahamonina, izay mahatonga azy ho mety amin'ny fampivoarana lozisialy.
Vahaolana: Ubuntu tsy misy fifandraisana Internet tariby na wifi
Netbeans azo alaina ao amin'ny repositories Ubuntu, ka raha te hanana kinova miorina amin'ny fomba mora isika dia tsy maintsy mankany amin'ny safidin'ny Ubuntu Software ihany. Rehefa tonga any dia tsy mila mitady ny teny Netbeans fotsiny isika ary tsindrio ny bokotra "Install". Raha ny mifanohitra amin'izay no tadiavinay hametraka kinova vaovao sy mahazatra, azontsika atao an-tanana izany. Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba fametrahana ny kinova NetBeans farany androany, dia ny 8.2. Hataoko ity fametrahana ity amin'ny Ubuntu 18.04, na dia azo atao koa amin'ny Debian sy Linux Mint.
Voalohany indrindra, tsy maintsy manazava isika fa raha hametraka ny kinova 8.2 an'ny Netbeans dia mila mahafeno fepetra roa amin'ny solosaina isika. Ny voalohany dia izay farafahakeliny RAM 2 GB no takiana. Ary tsy maintsy hananantsika ao amin'ny ekipanay ny Java SE Development Kit (JDK) 8. Ilaina ny fametrahana ity IDE ity. NetBeans 8.2 dia tsy mihazakazaka amin'ny JDK9, ary ny fanaovana izany dia mety hiteraka lesoka.
1 Ampidiro Java JDK 8
2 Ampidiro NetBeans IDE 8.2 amin'ny Ubuntu 18.04
3 Esory ny Netbeans
Ampidiro Java JDK 8
Nisy mpiara-miasa iray efa nilaza taminay ny fametrahana ny kinova Java samihafa amin'ny rafitray Ubuntu. Raha hametraka ny kinova Java 8 JDK ilainay, dia ampidirinay ao amin'ny rafitray aloha ilay webupd8team / java PPA. Mba hanaovana izany dia manokatra terminal izahay (Ctrl + Alt + T) ary karazana:
Raha vantany vao nampiana sy nohavaozina ny lisitry ny rindrambaiko, dia hikaroka fonosana mitondra ny anarana oracle-java8 toy ny aseho etsy ambany izahay ary hamita ny fametrahana:
Raha manana Java mihoatra ny iray napetraka amin'ny rafitrao ianao, azonao atao ny mametraka ny fonosana oracle-java8-set-default hametraka ny Java 8 ho default:
Ampidiro NetBeans IDE 8.2 amin'ny Ubuntu 18.04
Amin'ny fampiasana ny browser-nao tianao izao, mandehana any amin'ny Pejy fampidinana IDE ary ampidino ny kinova farany an'ny mpiorina NetBeans.
Manafaingana ny ubuntu
Azonao atao koa ny misintona ny script installer NetBeans amin'ny rafitrao amin'ny alàlan'ny fampiasana wget. Mba hanaovana izany dia manokatra terminal izahay (Ctrl + Alt + T) ary manoratra hoe:
Raha vantany vao vita ny fampidinana, ao amin'ny lahatahiry miasa raha mampiasa wget na amin'ny toerana itehirizantsika ny fisintomana avy amin'ny tranokala, dia hahita ny installer NetBeans isika. Mampiasa izao baiko manaraka izao, hataonay tanterahina ilay script. Vantany vao hanomboka amin'ny fametrahana isika:
Aorian'ny fandefasana ireo baiko etsy ambony, hiseho ny 'varavarankely fandraisana' ny installer. Kitiho ny Next raha hanohy (na ampanjifaina ny fametrahana anao amin'ny alàlan'ny tsindrio Customize) ary araho ny mpamosavy fametrahana.
Avy eo dia tsy maintsy hanao izany isika vakio ary ekeo ireo fehezanteny ao amin'ny fifanarahana fahazoan-dàlana. Manohy manohy amin'ny fikitihana ny Next isika.
Araka ny hitanao amin'ny pikantsary teo aloha, dia hifantina ny Fampidirana NetBeans IDE 8.2 fametrahana ary ny fampirimana izay ametrahana ny JDK napetraka. Manohy amin'ny fikitihana ny Manaraka.
Ao amin'ny efijery izay hitantsika izao, dia misafidy ny Fampirimana fametrahana mpizara GlassFish. Toy ny teo aloha, manohy amin'ny fikitihana ny Manaraka isika.
Amin'ny efijery manaraka, izay aseho ny famintinana fametrahana. Eto hampandeha ny fanavaozana mandeha ho azy izahay ho an'ny add-on napetraka amin'ny alàlan'ny boaty. Ankehitriny dia tsindrio Install raha hanomboka ny fametrahana.
Rehefa vita ny fametrahana dia tsy maintsy tsindrio fotsiny ny Vita. Afaka mankafy NetBeans IDE isika izao. Mila mitady izany amin'ny solosaintsika fotsiny isika ary tsindrio ilay mpandefa.
Esory ny Netbeans
Ny fanesorana ity programa ity dia tena tsotra. Tsy mila mankany amin'ny folder izay nofidintsika ho an'ny fametrahana fotsiny isika. Rehefa tonga any dia hihaona a rakitra atao uninstall.sh. Ity no rakitra handehanana hanaisotra tanteraka ny IDE amin'ny ekipanay. Ao amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T) dia tsy maintsy manatanteraka fotsiny isika, avy amin'ny fampirimana misy ny rakitra esory:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » NetBeans 8.2, apetraho amin'ny Ubuntu 18.04 ity IDE ity
Cesar Barrionuevo dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny fanazavana tsara toy izany. Mahagaga ny asany.
Mamaly an'i César Barrionuevo
Cesar G. Rivas dia hoy izy:
Salama, misaotra tamin'ny fandraisanao anjara, nataoko ny dingana rehetra, fa rehefa manokatra ny programa aho dia tsy manokatra tetikasa na rakitra hafa, na zavatra hafa, inona no azoko atao momba izany?
Valiny tamin'i Cesar G. Rivas
Damian Amoedo dia hoy izy:
Salama. Andramo esory ny Netbeans ary ampidino ny kinova "All". Raha mbola tsy mety aminao io dia andramo ny mametraka kinova Java hafa (ary apetraho toy ny default ao amin'ny rafitranao). Salu2.
Valiny tamin'i Damian Amoedo
Nametraka netbeans 8.2 daholo ny namana ary tonga amiko ny zavatra mitovy amin'ny fandefasana netbeans fa ny bokotra hamoronana tetikasa vaovao dia tsy manao na inona na inona, tsy manokatra ireo modules mitovy amin'ny tranga nisy an'i Cesar namana
Zavatra iray hafa, ahoana no ahafahako mamaha ny JDK napetrako?
Melof10 dia hoy izy:
Salama Nestor, handao anao horonantsary aho fa raha manaraka azy amin'ny taratasy ianao dia hamaha ny olana, amin'ny ankapobeny dia ny famaritana amin'ny netbeans ny kinova Java izay iasanao, dia ilay napetrakao ao amin'ny OS-nao. Tsapako fa io IDE io ihany dia manome anao ny mety hamaritra azy amin'ny fametrahana. Ity ny horonan-tsary:
Valiny tamin'i Melof10
DresF dia hoy izy:
Salama ry zalahy, nijanona teo amin'ny fivarotana UBUNTU aho ary hitako tao ny NetBeans. Na izany aza, nisy lesoka nitranga tamiko ary nandeha tany amin'ny tranonkala aho ary hitako ireo kaody terminal ireo ary ankehitriny dia alaiko izao 😉
ity ny rohy:
Valiny amin'i DresF
Misaotra namako !!
Mampandeha ny baiko sudo apt-get install oracle-java8-installer dia asehony ahy izany
Tsy misy ny fonosana Oracle-java8-installer, fa misy tohiny fonosana hafa
viridiana solis dia hoy izy:
Salama zavatra toy izany no nitranga tamiko, izao nataoko izao
sudo apt apetraho openjdk-8-jre
sudo apt apetraka openjdk-8-jdk
Mamaly an'i viridiana solis
Apache Netbeans dia efa nanala ny Netbeans 8.2
Mpamaky PDF inona no hampiasaina amin'ny birao tsirairay ao Ubuntu?
Kakoune, mpamoaka kaody tsara hanoloana an'i Vim